အလိုလောဘနည်း လွန်းလှသော ကန်စွန်းရွက်ခူးသူကြီး - Tameelay
အလိုလောဘနည်း လွန်းလှသော ကန်စွန်းရွက်ခူးသူကြီး
ဆင်းရဲလွန်းလို့မိမိတို့နယ်မှာ…..ကန်စွန်းရွက်ခူးပြီး….. တာလမ်းဘေးမှာချရောင်းပါတယ်…………. သူ့ကိုမြင်မြ င်ခြင်း သနားကြင်နာစိတ်ဖြစ်မိလို့….. ကားပေါ်ကဆင်းသွားပြီးဈေးမေးကြည့်ပါတယ်……
တစ်ရာဖိုးငါစီးတဲ့…….အကုန်လုံးဝယ်ပါမယ်အစည်းတွေရေလိုက်ပါဆိုတော့ ဝမ်းသာလွန်းလို့လက်တွေခြေတွေ တုန်လို့… … ဘေးကလူတွေက……ဝိုင်းရေပေးရပါတယ်…….
ပြန်မဝယ်နိုင်တဲ့ အတွ က်..အခုမှကန်စွန်းရွက်ခူးရောင်းတာ…… တစ်ရာဖိုးငါးစီး..တဲ့…..ဈေးထဲလည်း သွားမရောင်းရဲ ဘူး…..လူမျ.ားရင်ရှ က်လို့တဲ့……..
အခုရက်အတွင်းမှစရောင်းတော့…..အဆင်မပြေရှာဘူးတဲ့…..သူသူကိုကို…..ဆင်းခူးပြီးစားကြတော့….. နေ့လယ်လော က်ညိုးနွမ်းကုန်တဲ့အစည်းတွေကို…. .ချောင်းထဲပြစ်ချပြီး…..ရောင်းလို့ရတဲ့…… လေးငါးရာနဲ့……ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီးအိ မ်ပြန်နေရတယ်ဆိုတာ……
ဒီငွေတစ်ထောင်ဖိုးအတွက် မနက်ဘယ်အချိန်ထဲက ရေထဲဆင်းပြီး….ကျွတ်တွေမြော့တွေကြားမှာ…. .မိသားစုအတွ က်ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရပါလ်ိမ့်……..
သူ့အတွက်တော့……ဒီနေ့တော့….အားလုံးရောင်းရတဲ့နေ့ ဆိုတော့……လုပ်အားခလေးအပြည့်ရမယ့်နေ့ပေါ့…… ညိုးပုပ်လို့ရေထဲပြစ်ချစရာမလိုတဲ့နေ့လေးပေါ့…..
မိမိကသူ့ကိုသနားပြီး……..ငွေနှစ်သောင်းပေးပါ့မယ်…… ကျကွဲသွားတဲ့ရေပုံးတွေပါပြန်ဝယ်ဖို့ပေါ့..ဆိုတော့… သူက လုံးဝမယူပါဘူးတဲ့……ပိုတဲ့ခြောက်စီးကိုတောင် အစစ်ပေးပြီး…….တစ်ထောင်ပဲပေးပါလုတ်နေလို့…. .မနည်းဝိုင်းေ ချာ့ပြီး…..တစ်ထောင်အပိုပေးခဲ့ရပါတယ်……
.သြော်……….ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ….. အလွန်ရိုးသားသူတွေရှိနေပါလား…..အသိဥာဏ်မြှ င့်ပေးနိုင် ရင်..တန်ဖိုးရှိလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း.. နောက်အားတဲ့တစ်နေ့သူ့ဆီပြန်သွားပြီး…ရတဲ့နည်းနဲ့……ရိုးသားမှုကို…..ဂုဏ်ပြုပေးသွားဦးမှာပါ………..သူ့ဆီကဝယ်လာတဲ့ကန်စွန်းရွက်တွေကိုလည်း လမ်းကအလုပ်သမားတွေကိုပြန်လှူ.ပေးဖြစ်ပါတယ်…..
Credit – Sunthit
ဆငျးရဲလှနျးလို့မိမိတို့နယျမှာ…..ကနျစှနျးရှကျခူးပွီး….. တာလမျးဘေးမှာခရြောငျးပါတယျ…………. သူ့ကိုမွငျမွ ငျခွငျး သနားကွငျနာစိတျဖွဈမိလို့….. ကားပျေါကဆငျးသှားပွီးဈေးမေးကွညျ့ပါတယျ……
တဈရာဖိုးငါစီးတဲ့…….အကုနျလုံးဝယျပါမယျအစညျးတှရေလေိုကျပါဆိုတော့ ဝမျးသာလှနျးလို့လကျတှခွေတှေေ တုနျလို့… … ဘေးကလူတှကေ……ဝိုငျးရပေေးရပါတယျ…….
ပွနျမဝယျနိုငျတဲ့ အတှ ကျ..အခုမှကနျစှနျးရှကျခူးရောငျးတာ…… တဈရာဖိုးငါးစီး..တဲ့…..ဈေးထဲလညျး သှားမရောငျးရဲ ဘူး…..လူမြ.ားရငျရှ ကျလို့တဲ့……..
အခုရကျအတှငျးမှစရောငျးတော့…..အဆငျမပွရှောဘူးတဲ့…..သူသူကိုကို…..ဆငျးခူးပွီးစားကွတော့….. နလေ့ယျလော ကျညိုးနှမျးကုနျတဲ့အစညျးတှကေို…. .ခြောငျးထဲပွဈခပြွီး…..ရောငျးလို့ရတဲ့…… လေးငါးရာနဲ့……ခေါငျးငိုကျစိုကျခပြွီးအိ မျပွနျနရေတယျဆိုတာ……
ဒီငှတေဈထောငျဖိုးအတှကျ မနကျဘယျအခြိနျထဲက ရထေဲဆငျးပွီး….ကြှတျတှမွေော့တှကွေားမှာ…. .မိသားစုအတှ ကျကွိုးစားရုနျးကနျခဲ့ရပါလျိမျ့……..
သူ့အတှကျတော့……ဒီနတေ့ော့….အားလုံးရောငျးရတဲ့နေ့ ဆိုတော့……လုပျအားခလေးအပွညျ့ရမယျ့နပေ့ေါ့…… ညိုးပုပျလို့ရထေဲပွဈခစြရာမလိုတဲ့နလေ့ေးပေါ့…..
မိမိကသူ့ကိုသနားပွီး……..ငှနှေဈသောငျးပေးပါ့မယျ…… ကကြှဲသှားတဲ့ရပေုံးတှပေါပွနျဝယျဖို့ပေါ့..ဆိုတော့… သူက လုံးဝမယူပါဘူးတဲ့……ပိုတဲ့ခွောကျစီးကိုတောငျ အစဈပေးပွီး…….တဈထောငျပဲပေးပါလုတျနလေို့…. .မနညျးဝိုငျးေ ခြာ့ပွီး…..တဈထောငျအပိုပေးခဲ့ရပါတယျ……
.သွျော……….ကြေးလကျတောရှာတှမှော….. အလှနျရိုးသားသူတှရှေိနပေါလား…..အသိဉာဏျမွှ ငျ့ပေးနိုငျ ရငျ..တနျဖိုးရှိလိုကျမယျ့ဖွဈခွငျး.. နောကျအားတဲ့တဈနသေူ့ဆီပွနျသှားပွီး…ရတဲ့နညျးနဲ့……ရိုးသားမှုကို…..ဂုဏျပွုပေးသှားဦးမှာပါ………..သူ့ဆီကဝယျလာတဲ့ကနျစှနျးရှကျတှကေိုလညျး လမျးကအလုပျသမားတှကေိုပွနျလှူ.ပေးဖွဈပါတယျ…..
သွားပိုးစားခြင်းနဲ့ သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း
သွားပိုးစားခြင်းနဲ့ သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်တာဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖြစ်များတဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကလေး၊ လူငယ်နဲ့ အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပြီး လူတိုင်းလိုလို သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို သွားပိုးစားတာ၊ သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သွားကို သေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်နေ့ကို မနက်တစ်ကြိမ် ည တစ်ကြိမ် ၂ မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီး …
မသုံးရက် မစားရက် နှမ်းရောင်းရတဲ့ ငွေလေးကို နယ်ကသားသမီးဆီ ငွေလာလွှဲတယ် ဒါကို အတုဆိုပြီး ဘဏ်ဝန်ထမ်းက သိမ်းတော့
တစ်​​သောင်းတန်​အတု ဒါသိမ်းမယ်​ဆိုရင်​ ကျ​နော့်​ကို အစားပြန်​​ပေးပါ မရဘူး အကို သိမ်းပဲ သိမ်းခိုင်းတာ မသိမ်းပဲ ပြန်​​ပေးလိုက်​ရင်​လည်း ​နောက်​တစ်​ခါသုံးရင်​ ​ရောသုံးမှာ​လေ ဒါဆို တစ်​ရွက်​ ၅၀၀၀ ​တော့ ပြန်​​ပေးပါ မရဘူး အကို မထားခဲ့ရင်​ ရဲစခန်းဆီဖုန်းဆက်​လိုက်​မယ်​ ကျ​နော်​တို့က နှမ်း​ရောင်းပြီး က​လေးဆီ ​ငွေလာလွှဲတာ …
အမှိုက်လို့ထင်ထားကြတဲ့ ကြက်သွန်နီအခွံမှာ မယုံကြည်နိုင်စရာ အာနိသင်တွေ ရှိနေ …
ကြက်သွန်နီခွါပြီးတိုင်း အခွံတွေကို လွှင့်ပစ်တတ်ကြတယ်မလား ။ ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်ပြိးရင်တေ့ာ လွှင့်ပစ်မိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ ကြက်သွန်နီ အခွံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စားလို့တော့မရပါဘူးနော် .. ၁။ရောင်ရမ်းနာကြင်မှုတွေ သက်သာစေ ကြက်သွန်နီအခွံမှာ ရောင်ရမ်းနာကြင်မှုတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ သဘာဝအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ် ။ ခွာထားပြီးသော ကြက်သွန်နီအခွံတွေကို …